Somaliland oo waddo qorshe ganacsatada lagu dhiirro-galinayo maalgashiga dalka – Radio Daljir
Febraayo 18, 2013 9:51 b 0
Hargeysa, Feb 18 – Maamulka Somaliland ayaa ku hawlan hannaan ballaaran oo lagu kobcinayo dhaqaalaha Somaliland, kaasoo ganacsatada ku habaya qaabkii ay waddanka maal-gashu ugu samayn lahaayeen.
Qorshahaan oo uu wado urur maxalli ah oo lagu magacaabo Xiddigta Maal-gashiga (Star Investment),ayaa waxaa kaabaysa wasaaradda ganacsiga Somaliland, iyadoo ganacsada Somaliland loo soo bandhigay wadiiqooyin wax-ku-ool u ah dalka, ayna ku kobcin karaan dhaqaalahooda iyo midka guud dalka.
Munaasabad lagu maamuusayey hirgalinta qorshahaan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa, taasoo ay ka qaybgaleen madaxd ka tirsan Somaliland oo uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga ?Cabdirisaaq Khaliif Axmed, ganacsato iyo qaybo kala oo iskugu dhafan dhinacyada bulshada.
Xafladda ayaa laga sheegay, ka sokow kobaca dhaqaale iyo hormarinta dalka, qorshahaani in uu leeyahay faa’idooyin kale oo ay ka mid yihiin in dalka dib loogu soo celiyo aqoonyahannadiisii bannaanka u baxay, si ay ula soo laabtaan xirfadda iyo waayo-aragnimada ay ka soo biirsadeen qurbaha.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo daah-furay kulanka ayaa tilmaamay tallaabadaani in ay muhiimad weyn u leedahay ummadda Somaliland, loona baahan yahay in loo soo jeedsado sidii looga jibba-keeni lahaa.
Horay wasaaradda xannaanada xoolaha Somaliland ayaa soo bandhigtay qorshe midkaan la mid ah, kaasoo dhiirra-galinayey in loo jeedsado tabaca iyo daryeelka xoolaha nool.